Dil Ka Dhacay Degmo Ka Tirsan Gobolka Shabelaha Hoose. – Kismaayo24 News Agency
by admin 16th January 2020 0126
Wararka Warbahinta dalsan ee magaalaa Muqdisho ay ka helayso degmada Walanweyn ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in kooxo hubaysan ay ku dileen halkaas nin la sheegay in uu Nabadoon ahaa.
Dadka deegaanka ayaa dalsan u xaqiijiyay in nin lagu magacaab Axmed Xuseen oo ka mid ahaa Odayasha dhaqanka ee degmada lagu dhex dilay guri uu ka deganaa degmada Walanweyn,waxaana dilkaas kasoo baxaa faahfaahino kala duwan.
Dilka ayaa lagu eedeynayaa in ay geysteen rag ku labisna Diriska ciidamada dowladda,waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in ninka la dilay aad looga yiqiinay degmada iyo deegaanada kale ee hoostaga islamar kana aysan garanayn sababta loo dilay.
Degmada Walanweyn ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka dhacay dilal noocaan oo kale ah iyada oo badankoodna ay la xiriireen aanooyin qabiil lamasa oga hadii dilkaan dambe uu xiriir la leeyahay arrintaas.
Wki ma jirto cid ka hadashay waxaana Waxgaradka degmadu ay seegeen in ay aaska kadib la hadli doonaan Warbaahinta iyo marka ay soo xaqiijiyan cidda ka dambeysa dilkaas.
XOG: Sharmaarke iyo Odayaasha Hiiraan oo Maanta Kulamaya iyo warar kaloo sheegay in …
Gal-gaduud: Ra’iisul wasaare Sharmaake oo lagu wado in uu booqdo Dhuusamareeb iyo Guriceel